Fizahana ny fo sy fandinihan-tena
“Diniho aho, Andriamanitra ô, ary fantaro ny foko; Izahao toetra aho, ary fantaro ny eritreritro; ary izahao na misy làlana nampahory ato anatiko, dia tariho amin'ny lalana mandrakizay aho.». - Sal. 139:23,24
Taorian’ny niakaran'i Kristy tany an-danitra dia nivory tamin’ny toerana iray ny mpianatra mba hivavaka amim-panetren-tena sy fitalahoana amin'Andriamanitra. Taorian'ny folo andro nandinihan-tena sy nizahana ny fo dia voaomana ny làlana hidiran'ny Fanahy Masina tao amin'ireo tempolin'ny fanahy efa voadio sy voamasina ireo. Feno ny Fanahy ny fo tsirairay, toy ny hoe nirin'Andriamanitra ny haneho amin'ny olony fa sitrapony mihitsy ny hitahy azy ireo amin'ny fitahian'ny lanitra ambony vidy indrindra.
Inona no vokatra azo? - An'arivony maro no niova fo tao anatin'ny iray andro. Nandefa ny tarany manjelanjelatra avy teo ankavia sy ankavanana ny sabatry ny Fanahy. Niaraka tamin'ny ranitra feno hery dia nanindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka izany. Rava ny fanompoantsampy izay niharo tamin'ny fivavahan'ny olona. Niampy faritra hafa indray ny fanjakan'Andriamanitra. Re nanakoako, teny amin'ireo toerana maina sy ngazana teo aloha ny fiderana Azy. Tonga hery velona ho an'Andriamanitra ireo mpino niova fo sy nateraka indray. Hira vaovao no natao teo am-bavany, eny, fiderana an’Ilay Avo Indrindra mihitsy izany.
Nifehy azy ireo ny Fanahy ka hitany teo amin'ireo rahalahiny i Kristy. Tombontsoa tokana no niraisany. Lohahevitra tokana no nihazona ny rehetra, dia ny hanahaka an'i Kristy sy ny hanao ny asan'i Kristy. Tsapa teo amin'ny toetra tia manampy amim-pitiavana sy teo amin'ny teny feno halemempanahy ary ny asa tsy misy fitiavan-tena ny fahavitrihana mafana indrindra. Samy nitolona ny rehetra hanao izay tratrany sy izay tsara indrindra ho fampandrosoana ny fanjakan'i Kristy. "Ary niray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino. » -Asa. 4:32.
Nafenin’Ilay Mpampianatra lehibe tao amin'ireo mpianatra roa ambin'ny folo ny masirasiran'ny fahamarinana. Ireo mpianatra ireo dia nirahina ho fitaovana teo ampelatanan'Andriamanitra ho fanambaràna ny fahamarinana amin'izao tontolo izao. Nomena azy ireo ny hery avy tamin'Andriamanitra satria Mpamonjy efa nitsangana tamin'ny maty no nanisy fofon’aina taminy sady niteny hoe: "Raiso ny Fanahy Masina". Rehefa feno ny Fanahy izy ireo dia nandeha nanambara ny fahamarinana. Toy izany koa no anirian'Andriamanitra ny mpanompony mba handeha ankehitriny ka hitory ny hafatra efa nomeny azy. Raha tsy mbola nandray ny Fanahy Masina anefa izy ireo dia tsy afaka ny hilaza izany hafatra izany amin-kery. Raha tsy mbola nandray ny Fanahy izy ireo dia tsy afaka ny hahatsapa ny zavatra azon'Andriamanitra atao amin'ny alalany."